20 sano ka dib Maxaad ka xasuusataa 11 September? | Berberanews.com
Home WARARKA 20 sano ka dib Maxaad ka xasuusataa 11 September?
20 sano ka dib Maxaad ka xasuusataa 11 September?
Maalin Talaado ah 11-kii September 2001-dii, rag ismiidaamiyey ayaa xoog kula wareegay diyaarado kuwa rakaabka ah oo Maraykanka uu lahaa waxayna diyaaradahaas ku dhufteen laba daarood oo dhaadheer oo New York ku yaallay, halkaas oo kumanaan qof ay ku dhinteen.
Labo ka mid ah diyaaradahaas ayaa lagu dhuftay Daarihii Mataanaha ahaa ee ganacsiga ee ku yaallay bartaha New York.
Diyaaradda koowaad ayaa ku dhacday daarta dhanka Waqooyi xigtay saacaddu markay ahayd 08:46 wakhtiga New York. Tan labaad ayaa lagu burburiyey Daarta dhanka Koonfureed xigtay saacaddu markay ahayd 09:03.
Previous articleCaddaani: Masuul Karti iyo Daacadnimadiisa Suugaani ka Curatay
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo xil-ka-qaadis iyo magacaabid sameeyay